Iyo nyowani software inokutendera iwe kuve ne3D Kubata pane chero Smartphone | IPhone nhau
Iyo nyowani software inokutendera iwe kuve ne 3D Kubata pane chero Smartphone
Kuve neiyo 3D Kubata mabasa zvinoita sekunge ivo havazove yakasarudzika ficha yeiyo iPhone 6s kwenguva yakareba, tekinoroji inofambira mberi, uye munzvimbo dzese. Isu tatova kuwana yekutanga vhezheni yeyera label 3D Kubata. Iko kusarudzika kweiyi nyowani sisitimu iyo inokutendera iwe kuti uve ne 3D Kubata pane chero chishandiso, ndeyekuti hazvireve kuti inoda sensor yekumanikidza, senge iyo inosanganisirwa muma iPhone 6s pasi payo skrini. Iyi software nyowani inogona kugadzirisa mushambadziro wetafoni, ndiko kuti, nekumisikidza chimiro chakaburitswa neApple seicho, sezvakaitika muzuva rayo neTouch ID.
Zvishoma nezvishoma isu tave kutotanga kuona kuti mamwe marangi anotanga kushandisa ino nyowani system, zvisinei, zvinoita sekunge vari kuda kuita vasina kumanikidza sensor, iyo inosanganisirwa ne iPhone 6s, saka hatizive kuti ino chaiyo system inogona sei be.zvinongova zve software. Panyaya yeiyo iPhone 6, isu tinowana akafanana mabasa nekuda kweJailbreak, pane tweak iyo kuburikidza nesoftware zvakare inotibvumidza kunakidzwa neiyo 3D Kubata tekinoroji, asi zvakare, pasina kuwedzera kana kunyatsoita iyo yekumanikidza sensor inotipa isu.
ForcePhone ndomaitiro avasarudza kufonera software iyi inoenderana neApple. Yakave yakagadzirwa kuYunivhesiti yeMichigan. Sekureva kwevagadziri vayo, iyo beta vhezheni ichave ichiwanikwa yekurodha pasi kutanga munaJune, uye inoramba ichionekwa kuti inowedzera sei pasirese nyika yeApple mafoni, sezvo chinhu chega chakakosha apa ndechekuti vashandisi vekushandisa vanopawo masendi avo maviri, nekuti kana vasingaite kuti maapplication avo aenderane, hazvibatsiri zvachose. Muchiitiko cheiyo iPhone, vagadziri vakapindura zvakaringana kune 3D Kubata tekinoroji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Iyo nyowani software inokutendera iwe kuve ne 3D Kubata pane chero Smartphone
Vhidhiyo kuratidzira kwekuvapo kwejereak-webhu saJailbreakMe